UFC 263 UFC na Prediciones - Stake site - jluis37.com
N’oge Arizona, lụrụ ọgụ u N t anyị abịaghachila na PPV nwere nnukwu ihe jupụtara na njiri mara mma kachasị mman’izu ụka a. Kaadị a nwere atụmatụ ịkọgharị aha abụọ, anyị hụrụ ha abụọ na-akwụsị esemokwu,n’izu a anyị nọ ebe a iji dozie akara. Kaadị a na-egosipụtakwa nke mbụ-agba 5 na-abụghị aha na ọgụ na-abụghị isi. Nke a bụ kaadị akụkọ ihe mere eme, anyị enweghị ike ichere ịhụ ka ọgụ ndị a si dị egwu, Ka anyị banye n’ime!
Leon Edwards na Nate Diaz
Nke a bụ akụkọ ihe only eme na ọgụ dị oke egwu d e UFC dịka ọ na-egosi akara mbụ na-abụghị aha na isi okwu na-abụghị isi nke 5 gburugburu na UFC. Ọgụ a nwere ike ịgbanwe mgbanwe na ndị UFC ma mụọ ụdị ndị ọzọ na-abụghị aha 5 gburugburu ngalaba-isi ihe n’etiti ndị na-ese okwu. A na-ele ọgụ that a anya dị ka ike no.1 na-alụ ọgụ na ngalaba Welterweight dịka ọkwa 3 Leon”Rocky” Edwards ga-ele anya na-ewere akụkọ mgbe ochie, Nate Diaz.
Leon Edwards nwere otun’ime mmeri kachasị ogologo na UFC, na-achịkọta 8 na-enweta mmeri kemgbe 2016. E only ya ka ọ bụrụ onye na-ewepụ aha ya na Tyron Woodley manan’ihi ọrịa na-efe efe, Leon enweghị ike ịlụ ọgụ maka afọ 2. Ndị agha na-alụ ọgụ malitere inwe obi abụọ ma ọ bụrụ na Leon ka nwere ya n’ime ya ma ọ bụ na ọ dị nro n’ihi enweghị oge Octagon. Leon nwetara onwe un akwụkwọ maka ọgụ na ọkwa 13 Belal Muhammed ma ka ọ na-ele anya iweghara ọgụ ahụ, ọ kwụsịrịn’ihi nsogbu anya mberede.
Mgbe o nwesịrị Covid-19, na-eme ka ọgụ un gbanwee ọtụtụ ugboro, yana itinye aka na asọmpi na-enweghị isi, Leon mechara nweta ọkwa ọ kwesịrị. Leon bụ onye ọkpọ ọkpọ Britain mara mma nke na-etu onwe ya isi na nchịkọta akwụkwọ ọkpọ un t ike 70 percent Takedown agbachitere. Leon ga-ele anya kwuo nkwupụta megide Nate ma kpọọ aha maka aha aha a na-echere.
Nate Diaz bụ otun’ime aha kachasị na egwuregwu ọgụ, ọ bụ onye ama aman’okporo ámá yan’okporo ámá-na-ekwu okwu na ụdị ọgụ ọgụ. Nate bụ akara ngosi nke egwuregwu ahụ na njem un iji nwee ihe ịga nke ọma malitere mgbe o mere ka iwe miniature merie Ultimate Fighter oge 5. Nate abụwo otu n’ime ndị agha kachasị amasị na akwụkwọ akụkọ dịka ọ na-etinye aka na ọgụ 8 nke abalị na 14 UFC ọrụ niile afọ.
Nate kwuputara onwe un dị ka kpakpando zuru ụwa ọnụ mgbe ọ na-akwụ ụgwọ dị ka 5.0 underdog miniature bụrụ nwoke mbụ kụrụ Conor Mcgregor na UFC. Nate bụ eriri nwa ojii nke 2nd na Jiu-Jitsu, mana ọ na-adaberekarịn’ike un iji nweta mbata ya na ọgụ ya na ndị iro ya.
Ọgụ that a bụ ihe na-atọ ụtọ dịka anyị ga-ahụ onye ọkpọ ọkpọ na-agbachitere agbachitere siri ike na-agbada na brawler na nrubeisi. Menmụ nwoke abụọ ahụ nwere ezigbo obi, ọgụ a ga-anọgide na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ d e ọ gaa ebe dị anya.
Nke a bụ ọgụ aghụghọ maka ụmụ nwoke abụọ dịka Leon nwere ihe ọ bụla ga-efufu, ọ nọ na-achọ inweta ohere ma nwee ya ugbu that a iji gosipụta ihe kpatara o ji tosi aha ya. Leon ga-ele anya iji ọkpọ un adorable kpuchie ebe dị anya website Id ịga Nate. Ọ bụ ezie na, Nate ga-eleba anyan’iji un jabs na ụta Stockton, na-emecha dabere na grapp un iji gafee akara. Leon bụ onye mmeri dị elu ebe a ma anyị kwenyere ma ọ bụrụ na ọgụ a na-adịgide n’ụkwụ, mgbe ahụ ọ ga-eweli aka ya.
N’ikpeazụ, anyị kwenyere na ọgụ a ga-abụ ihe na-atọ ụtọ gburugburu 5 ma anyị na-adaberen’akụkụ ọkacha mmasị ebe a na Leon bụ onye ga-eleba anya na izu ụka a. Ma anyị enwetala ihe ịtụnanya nkwalite maka ọgụ anyị Fans na-eche Nate nwere ike nweta ya, ị nwere ike nweta nkwụghachi ma ọ bụrụ na Nate tụfuru website Id mkpebi.
Amụma – Leon Edwards website Id Mkpebi
Nsogbu Industrylọ Ọrụ – 2.25 (Nsogbu bụ isiokwu ịgbanwe, Lezie anya mgbe nsogbu ga-adị ndụ na Stake.com).
Deiveson Figueiredo na nke Brandon Moreno
Anyi enwetala onwe anyi otun’ime ihe ndi ozo anyi na-acho anyan’ime mgbede a, mgbako na-akpali akpali nke UFC Flyweight Championship. Egwuregwu a bụ otu n’ime ọgụ nke afọ na 2020 na mgbe a na-ekpe ikpe na-agbagha ọtụtụ ndị na-ese, ndị na-agba ọgụ enweghị ike ichere maka mgbapụta a. Onye ọchịchị na-achị achị bụ Deiveson “Deus Da Guerra” Figueiredo ga-ewere no.1 na-asọmpi Brandon “The Assassin Baby” Moreno.
Deiveson Figueiredo bụ otun’ime ndị mmeri kachasị egwu na egwu dị na akwụkwọ UFC. Deiveson na-ebi ndụn’aha agha un nke pụtara Chineke nke Agha, ebe ọ dị njikere ịga agha oge ọ bụla ọ banyeren’ime UFC Octagon. Na obere oge 4 na-alụ ọgụ UFC, ọ nwetara mmeri dị mkpa iji merie eriri belt ahụ na 2020.
Deiveson kụrụ UFC maestro Joseph Benavidez ugboro abụọ, otu ugboro website Id knockout na otu website Id nrubeisi. Mgbe nke a gasịrị, ọ gbachitere aha un megide onye na-asọ mpi bụ Alex Perez miniature nyefee ya gburugburu 1. Ọsọ a na-egbu egbu maka Deiveon nyere un obi ike ịtụgharị mgbe otu ọnwa gachara Brandon Moreno iji wepu 2020 na-aga nke ọma na mmeri 4.
Anyị amachaghị na anyị ga-enwe ọgụ nke afọ na-agwụ na njedebe kachasị. Deiveson dị ize ndụ ebe ọ bụla ọgụ ahụ na-aga, ọ nwere aka dị ukwuu iji kụtuo onye ọ bụla na nkà BJJ dị ize ndụ iji nyefee ndị agha kachasị mma. Na-anya isi ihe 85 percent mechara 9 knockouts na ntinye 8, Chineke nke Agha na-ele anya ịkwụsị agha website Id njedebe kachasị na ngwụsị izu a.
Brandon Moreno egosila na ọ ga-abụ egwuregwu siri ike maka onye agha ọ bụla o chere ihu na ọrụ 5 afọ UFC ya. Brandon nwere ndị na-ese okwu siri ike na nkewa un t Askar Askarov meriri na onye mmeri Deiveson Figueiredo.
Brandon bụ onye mgba mgba nwere egwuregwu nrubeisi siri ike gosipụtara oge 10 na ọrụ MMA ya. Brandon nwere ihe ịga nke ọma na ihu igwe oké ifufe nke Deiveson na ọdịda ya jabs na nzukọ mbụ ha. Ọ ga-ele anya itinye usoro egwuregwu yiri ya n’oge a ka ọ na-ele anya ịbụ onye mbụ a mụrụ na Mexico na-enweghị Undisputed UFC Champion.
Ihe ndị Fans na-atụ anya dị elu mgbe ha hụrụ otú mbido mbụ ha si pụta na ndị na-agba mgba na-enwe olileanya maka banger ọzọ website Id ụmụ nwoke abụọ a. E kwuru na Deiveson nọn’ụlọ ọgwụ ụbọchị ole na ole tupu ọgụ ya gara aga, ọ kwenyere na ọ metụtara arụmọrụ ya. Ebe Moreno kwenyere na ọ bụ Flyweight kachasị mma n’agbanyeghị agbanyeghị ọnọdụ ọ chọrọ iji gosipụta nke ahụ.
Deiveson enweghị ndidi na ọgụ mbụ miniature lelee ịkụ aka Brandon website t gburugburu 1. Contrarily Brandon gosipụtara mmụọ miniature buso ọgụ ndidi nke dugara na nsonaazụ na-achọsi ike maka ya. E debere atụmatụ egwuregwu ahụ, Deiveson ga-ele anya inwekwu ndidi miniature bulie gbaa ya, ma Brandon ga-achọ ka ọ gbakọọn’ọtụtụ mgban’oge a. Na ngwụcha, anyị cheren’agha nke Chukwun’agha ga-emeri ebe a,n’oge a ọ ga-enwe ike imecha isi nke a.
Amụma- Deiveson Figueiredo website Id Knockout
Nsogbu Osisi- 2.90 (Nsogbu bụ isiokwu ịgbanwe)
Israel Adesanya na Marvin Vettori
Oge mmemme nke mbụ, nke a bụ mmegharị nke abụọ na kaadị a nke a ga-alụ maka UFC Middleweight Championship Undisputed. Mgbe ọ gbasasịrị ọrụ mbụ un mgbe ọ na-achụso mmeri abụọ, ndị na-alụ ọgụ na-enwe obi ụtọ ịhụ Israel azụ na midweight iji chebe eriri ya nke ọma maka oge 3. Egwuregwu a na-akpali mmasị dịka ụmụ nwoke abụọ a nwere egwuregwu asọmpi 3 afọ gara aga ebe Israel meriri website Id mkpebi nkewa. Izu ụka a agaghị enwe obi abụọ ka ndị a na-abanye Octagon iji chọpụta onye kachasị mma. Onye ọchịchị na-agbachitere onye mmeri Israel”The Last Stylebender” Adesanya ga-ewere ọkwa 3 Marvin”The Italian Fantasy” Vettori.
Gbaso Conor Mcgregor, Israel Adesanya abụwo otun’ime kpakpando kachasị na egwuregwu egwuregwu ụwa. Adesanya emeriwo obi ndi aghan’uwa dum website Id uju agha un t ike ya. O nwere ederede 9-0 dị ọcha na Middleweight ebe ọ meriri mmeri 4 d e ịgbachitere eriri un ugboro abụọ.
Israel echewo ụdị nsogbu dị iche iche ihu na ọrụ UFC un dị mkpirikpi website t ndị mgba siri ike, ndị na-eme egwuregwu na ndị ike. O gosiputala mgbe nile na mgbe ekwuru un niile, ọ bụ otun’ime ndị agha kachasị mma ịbanyen’ụkwụ UFC Octagon.
Israel bu ihe ndi ozo nke oma nke nwere ihe njo 87 percent weputara agbachitere nke gosiputara odi irè na oru un 10. Israel nwere otun’ime ọgụ kachasị elu IQ na akụkọ UFC na ọgụ un ịmaliteghachi na-ekwu maka nnukwu ihe nketa ya. Israel ahapụla akụkọ UFC dịka Anderson Silva, Robert Whittaker, na Yoel Romero na egwu un tinyere njem un ịbụ onye ọgụ kachasị mman’ụwa. Israel nwere okpukpu iri na ise na-ada ụda na ọrụ MMA ya, ọ ga-ele anya ịgbakwunye d e ngụkọta izu ụka a.
Marvin Vettori bụ onye ama ama maka inye eze Israel ọgụ ya siri ike na Octagon na-akpọrọ ya gaa mkpebi nkewa. Mgbe o nyesịrị Israel mkpebi siri ike, Marvin kpebisiri ike ịrịgo elu miniature zukọta nnukwu mmeri ọgụ 5 nke meriri ya ugbu a maka ọla edo.
Marvin Vettori bụ onye mgba mgba nke nwere ihe egwu dị egwu mgbe ọgụ ahụ meriri ya, ọ kwadoro ya na ọrụ ntinye 9. Marvin agafeela ule ahụ megide ndị dị ike dịka Jack Hermansson na Kevin Holland iji nweta mgbatị a na-echere nke ọma. Marvin na-achọ ime akụkọ ihe mere eme ka ọ na-eche na ọ bụ onye mbụ na-akwadoghị Italiantali na UFC.
A na-atụsi anya ọgụ that a ike mgbe ha nwesịrị mbido nso ebe Israel hụrụ ihe ịga nke ọman’ụkwụ na Marvin yiri egwu na ala.. Israel ga-ele anya idobe anya ya, feint Marvin miniature lebe anya imebi feint website na mpụga. N’oge na-adịghị anya, Marvin ga-eleba anya imechi oghere ahụ ma mee ka Izrel dọrọ n’ala iji yie egwu ntinye.
Ndị na-alụ ọgụ na-enwe obi abụọ na Israel na-esochi mmeri un na-enweghị ihe ịga nke ọma iji weghara eriri two ebe ọ tụfurun’ihi iweda ya. Dị ka Israel ji kwupụta”Y’all of ga-echezọ”, Israel bụ otun’ime echiche kachasị nkọ na MMA eluigwe na ala ma ọ nwere cardio maka afọ. Ọgụ ahụ ịbụ agba 5 ga-amasị Israel na Marvin ga-amalite ida mgbe agba 3 gachara mgbe ọ dara ihe ịga nke ọma. Anyị na-eche ma ọ bụrụ na Israel nwere ike ichebe mbido mbido ọ nwere ike nweta ngwụcha tko, bụrụ nwoke mbụ iji mechaa Nrọ Italiantali.
Nke a bụ ihe anyị ji obi ike ghotan’abalị; anyi na ndi mmadu anyi no more dika anyi kwenyere na obu onye agha karie ebe a ma o gha aghaghachi azu ihe eji eme ya. Anyị jin’aka na anyị na-enye ndị na-alụ ọgụ ọgụ nzọ nke ruru $50 $ ebe anyị ga-akwụghachi gị ma ọ bụrụ na Israel efunahụ, buru ụzọ kwalite nkwalite a dị ịtụnanya ugbu a. https://promotions.stake.com/adesanya-vettori-2/
Amụma- Israel Adesanya website Id Knockout
Nsogbu Osisi- 2.65 (Nsogbu bụ isiokwu ịgbanwe)
Jide ọgụ ndị a dị ịtụnanya naanị na UFC PPV https://www.ufc.com/ppv ma nweta UFC kachasị mma naanị na Stake.com https://stake.com/sports/mma/ufc/ufc-263-adesanya- vs-vettori / agba